Ogaden News Agency (ONA) – Shabakadihii daba-qoodhiga oo ka murugaysan fashilka kaga dhacay gumaysiga MN
Shabakadihii daba-qoodhiga oo ka murugaysan fashilka kaga dhacay gumaysiga MN
Posted by ONA Admin	/ December 5, 2011
Waanu ogayn in adeegayaasha gumaysiga ee loo yaqaano dabaqoodhiga ay aad uga murugoodaan jabka soo gaadha gumaysiga Itobiya. Sidaa darteed ceebtii iyo guuldaradii shalay ka qabsatayMinneapolis safiirka gumaysiga Itobiya u fadhiya Washington waxay uur-ku-taalo ku reebtay qaar badan oo u qaamaysnaa gumaysiga oo xoolo badan kaga cunay waxaan tashwiish ku furaynaa wadajirka iyo mintidnimada jaaliyadaha Ogadenya ee caalamka ka bidhaansnaya dhaq-dhqaaqa gumaysiga ee hiilka lagarab taagan shacabkooda uu ku xasuuqayo Meles Ogadenya.
Kooxdaa aan soo tilmaanay ee guuldarada ay ku habsatay banaanbixii shalay ayaa waxaa ugu horeeya ninka lagu magacaabo Cabdilaahi Gariile (wabishabeele) oo ka mid ah kuwa loo xilsaaray hagaajinta sumcadda Meles Zinawi taasoo isaga iyo Hagos Sehay oo ah Tigreega ay ku guuldareysteen inay u faafiso barnaamijkii ay soo dhoodhoobeen shirkadda WPR ee qaabilsan arimahan.
Ninkan ayaa ku muujiyay shabakada uu gumaysiga ugu adeego siduu uga xumaaday guuldarada soo gaadhay safiirka Itobiya, isagoo sabab uga dhigay arintaa — ( oo aan lagala tashan waxgaradka, odayaasha, ururrada haweenka iyo dhalinyarada jaaliyadda deegaanka Soomaalida ee gobolkaMinnesotaayaa fashilmay. WSH). Wuxuu intaa raaciyaya — (Shirkan oo loo ijaaray hool weyn oo qaada dad dhan 2,000, kuna baxday lacag dhan $15,000 oo dollarka Mareykanka ah, waxaa isugu yimid dad dhan 28, kuwaasoo intooda badan katirsan qeybaha kala duwan ee mucaaradka dowladda Itoobiya, una yimid goobta ujeeddo qaas ah.). Xogta aan haynay waxay ahayd in 28kaa uu sheegay ay ka socdeen safaaradda ay qaar u ololeeya wayaanaha iyo 2 Somali ah oo ka dhex muuqday. Hadase wixii tagayna waxay ahaayeen bay yidhaahdeen mucaaradka ku kacsan Meles, sidaa darteed, wax taageersanba ma jiraan umbay noqon macnaha 28kii xaadirayna ku dhohoo.
Wuxuu shaqsigan qaanta loo haysto ku daray intaa in haddii lala tashan lahaa wuxuu ugu yeedhay jaaliyadda deegaanka Somalida Minnesota safiirka si fiican loogu camiri lahaa goobta oy soo buux dhaafin lahaayeen gabdho buraanburaya iyo dhalinyaro dhaantaynaya. Ma aanu cadaynin ninkan inay dadka lacag soo siin lahaayeen iyo inay ka soo ururin lahaayeen maamulada Somaliyeed, waxaase hubaal ah in aanay shacabka Somaliyeed ee Ogadenya hadda u heelanayn inay u sacaba tumaan kuwa gabdhahooda ku kufsanaya waddankii (ka dhagayso hoos).
Midkan iyo kuwa kalee dalaaliinta Meles kaga cunay maalka faraha badan shacabka Somalida Ogadenya ayaan soo afduubaynaa, waxaa hubaal ah inay in badan ku waabariisan doonaan guuldaro ku dhacda gumaysiga.